Ị nọ ebe a: Mbido > Greenwich mgbaka
Greenwich MindCare Dementia Nkwado
Ọrụ ozi na nkwado nke Greenwich MindCare Dementia na-enye nkwado dị elu iji nyere ndị bi na Greenwich nwere ọrịa mgbaka aka ibi ndụ nke ọma ma nọgide na-enwere onwe ha ogologo oge enwere ike. Ọrụ ahụ na-akwadokwa ndị na-elekọta onye nwere nkwarụ anaghị akwụ ụgwọ.
Ọrụ anyị na-enye gụnyere:
Ndụmọdụ nkeonwe na ozi
Atụmatụ nkwado onwe onye, ​​otu onye
Nyere aka nweta nkwado ndị ọzọ, ọrụ na akụrụngwa obodo
Rlọ ọrụ na-elekọta ndị ọrụ nlekọta
Nkwado ndị ọzọ na kọntaktị
Ọhụrụ: Dementia Café na nbanye nke ndị nlekọta
Kafe Dementia ọhụrụ anyị na ndị nlekọta emeghela ugbu a!
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ bụ maka ndị ahịa nwere nchoputa nke dementia bụ ndị bi na Greenwich. A na-anabatakwa ndị nlekọta ezinụlọ ịbanye na ya.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-agba site na 10am - 12pm na Tọzdee mbụ nke ọnwa ọ bụla (ma e wezụga June n'ihi Platinum Jubilee). Ọ bụ ohere maka ndị na-arịa ọrịa dementia na-agbakọta ọnụ maka ntụrụndụ, nka na nka, egwu na ncheta.
Mgbe e mesịrị, site na 1pm - 3pm, ndị nlekọta ezinụlọ nwere ike ịkparịta ụka na otu n'ime ndị ndụmọdụ anyị na nkwụsịtụ, ebe ha ga-enwe ike ịnata ndụmọdụ banyere ihe ọ bụla na ihe ọ bụla gụnyere ọrụ nlekọta, dịka ọmụmaatụ: ịnweta ọrụ mmekọrịta; uru; ọzụzụ mmata nhụsianya; na ọdịmma onye nlekọta.
Mgbe ole: Tọzdee mbụ nke ọnwa ọ bụla.
Mgbe ole: Dementia Café na-agba site na 10am - 12pm; Ndoba ndị nlekọta site na 1pm – 3pm.
ebe: ụlọ elu na Greenwich Careers Center, The Stables, 76 Hornfair Road, London, SE7 7BD – Map.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nkọwa ndị ọzọ gbasara nnọkọ ndị a, biko kpọtụrụ anyị site na iji nkọwa ndị dị n'okpuru.
Kpọtụrụ na ndị na-ezigara anyị
Ntugharị na ajụjụ niile maka ndị nwere nchoputa nke dementia, ndị nlekọta na ndị ọkachamara na-achọ ndụmọdụ na ozi na-abịa site n'otu ebe ohere.
Biko kpọtụrụ anyị dị ka n'okpuru.
ekwentị: 020 3198 2222
Greenwich nke Dementia gụnyere
Anyi bu ndi Dementia Inclusive Greenwich, atumatu nke n’aruru ndi nwere mgbaka, ndi n’elekota ezi-na-ulo ha, azumahia obodo di iche-iche, ndi otu ndi otu obodo na ndi otu aka ha ime ka obodo a buru ebe mmekorita ma nwekwaa ebe obibi, mmuta, oru na nleta.